Umatshini we-CO2 we-laser we-laser usetyenziselwa ukukrola, ukumakisha kunye nokusika amalaphu obuchwephesha, impahla, ufele, izihlangu, izithuthi, iikhaphethi, isandpaper, amakhadi ephepha, intengiso kunye namanye amashishini.
Ifakwe CO2 RF intsimbi laser umthombo kunye nobuchwepheshe eliphezulu-zobugcisa Galvanometric, usebenzisa-axis ezintathu onamandla egxile technology galvanometer processing, inkqubo laser Goldenlaser kaThixo Galvo yinkokeli kushishino kwinqanaba lobugcisa.
Inkqubo yethu yeGalvo laser yenzelwe ukuba kusetyenzwe nge-laser ngobungakanani bendawo entle, uluhlu olusebenzayo kunye nokuguquguquka okuphezulu. Inempawu zokuchaneka okuphezulu kunye nesantya esingenakuthelekiswa nanto xa kuthelekiswa nenkqubo ye-gantry laser (XY axis laser plotter).
Umzekelo No .: ZJJG-16060LD
Ukubhabha okupheleleyo kweGalvo Laser Cutting kunye noMatshini wokuMakisha ngeKhamera
I-ZJJG-16060LD i-Galvo kunye negantry yomatshini ohlanganisiweyo we-laser isebenzisa umendo opheleleyo wokubhabha, oxhotyiswe ngeglasi yeglasi ye-CO2 kunye nenkqubo yokuqonda ikhamera. Inguqulelo yezoqoqosho kunye nohlobo oluqhutywa yirm JMCZJJG (3D) 170200LD.
Umzekelo No .: JMCZJ (3D) 160100LD
CO2 Galvo Laser Matshini kunye swa ukuba mfanekiso Cutting
Inkqubo ye-laser ye-3D enamandla
Indawo yokulungisa indawo eyi-450 × 450mm
Iyakwazi ukugoba ngaphandle komthungo ukuya kuthi ga kwi-1600mm
Qengqa ukuhambisa amandla
Umzekelo No .: ZDJMCZJJG-12060SG
I-SuperLAB | XY Gantry & Galvo laser umatshini kunye CCD Camera
I-SuperLAB, ukumakisha okumanyeneyo kwe-laser, ukukrola kwe-laser kunye nokusika kwe-laser, liziko lokulungisa i-CO2 lezinto ezingezizo zesinyithi. Inemisebenzi yokubeka umbono, ukulungiswa okukodwa kunye nokugxila ngokuzenzekelayo ...
Umzekelo No .: ZJ (3D) -170200LD
I-Galvo Laser yesikhumba ekroliweyo yokusika umatshini woShishino lwezihlangu
Isantya esiphezulu kunye nefomathi enkulu ye-laser, ukukrola nokusika. Inkqubo yokuqhuba kabini enesakhiwo sendawo yokubeka izixhobo. Yenzelwe inkqubo ye-galvanometer.
Umzekelo No .: ZJJG (3D) 170200LD
Ukusika umatshini weGalvo Laser kunye noMatshini oQinisa iJersey Fabric
Umatshini we-laser oguquguqukayo onokusika, ukrole, ukugcoba kunye nokuncamisa ijezi, ipholiyesta, imicrofiber, nokuba wolule ilaphu.